Hatsarao tsara sy haingana ny hatsaran'ny sary ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Graphic Design, sary, Photoshop
Hatsarao ny kalitaon'ny sary ao Photoshop mora sy haingana, dia zavatra mety hamonjy ny aintsika amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha. Nitranga tamintsika rehetra izany taorian'ny iray fitifiran-tsary mahita sary tsy dia mifanohitra firy izahay, tsy misy fampisehoana ... raha fintinina, tsy fahampian'ny kalitaon'ny sary.
Imbetsaka isika no manao Saripika ny finday hijerena fotoana fa matetika dia ratsy be ny kalitaon'ireny sary ireny, noho io antony io sy antony hafa dia ilaina ny fahalalana ny sasany lafiny fototra hanatsarana kalitao ny sarinay ao Photoshop.
Ireo no ilay fizarana Handeha hamerina hipoka ao amin'ny Photoshop isika hanatsara ny kalitao ny sarinay:
Hanomboka isika avereno indray ilay fampisehoana ny sary. Ny fampisehoana amin'ny analogy na nomerika dia maneho ny jiro izay miditra amin'ny sarintsika. Raha hazavana maro no tonga amin'ilay sary dia hodorana bebe kokoa ary raha kely ny jiro dia tonga maizina kokoa ny sary. Rehefa misy hazavana be (jiro be) ny sary dia antsoina izy lakile avo, ary rehefa manana hazavana kely izy dia antsoina ambany fanalahidy. Miankina amin'ny zavatra tadiavintsika izany, dia zavatra iray na hafa no safidintsika.
Mba hamerenana ilay fampisehoana ao Photoshop mila mandeha amin'ilay safidy fotsiny isika sary / fanitsiana / fisehoana, takelaka iray no hisokatra ary tsy maintsy handeha ihany isika manitsy fampisehoana araka ny itiavantsika azy.
Ny zavatra manaraka izay hamboarinay amin'ny ankapobeny dia ny kalitaon'ny loko eo amin'ny sary, noho izany dia mankany amin'ny kiheba isika sary / toerana / hamafiny. Ity safidy ity dia ahafahanay manome anao bebe kokoa manery ny loko ny sary.
La mpandoko loko dia lafiny iray tena lehibe amin'ny sary, sary misy Dominant loko mavo (mafana) noho ny sary misy ny loko manga (mangatsiaka) maneho zavatra samihafa amin'ny haavon'ny psikolojia loko. Mba hanovana an'ity loko ity dia avela hiditra Photoshop mila mandeha amin'ilay safidy fotsiny isika sary / fanitsiana / fandanjalanjana loko.
Photoshop manana safidy tena tsara manitsy ny marimarina kokoa amin'ny alàlan'ny fisafidianana mifantina izay mamela safidio izay loko tianay ovaina. Mba hanaovana izany dia mila mandeha amin'ny safidy fotsiny isika fanitsiana sary / fanitsiana / fisafidianana.
Amin'ity safidy ity fanitsiana mifantina mila mamerina tsikelikely ireo loko isika amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ireo tonony sasany asehon'ilay fitaovana antsika.
El famirapiratana sy fifanoherana zavatra tena izany manan-danja amin'ny sary, azontsika atao ny mamerina azy io amin'ny ankapobeny sy haingana amin'ny safidin'ny fanitsiana / famirapiratana ary fifanoherana de Photoshop. Mamerina ny famirapiratan'ny sary sy ny mampifanaraka ny sary amin'ny zavatra tiantsika izahay mandra-pahatongantsika a vokatra manintona kokoa ny tsara kokoa ny kalitaon'ny sary.
Ireto ny sasany amin'ireo fitaovana ampiasaina betsaka indrindra rehefa retouching ao Photoshop ho an'ny sary avo lenta kokoa. Tokony ho fantatsika izay tadiavintsika amin'ny sarintsika mba hahalalana hoe inona avy ireo teboka averina eto amin'ity sary ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Hatsarao haingana sy haingana ny kalitaon'ny sary ao amin'ny Photoshop